Indawo yokuhlala yaseMuskoka
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguDeanna
Wamkelekile kwindawo yethu entle yaseMuskoka ebekwe kwindawo efana nefama. Le loft yabucala ifanelekile kwisibini okanye iqela elincinci elijonge indawo ethe cwaka yokuya elizweni ngelixa lisonwabela izibonelelo zehlathi elihle leMuskoka landscape.
Ngomnyango wayo wabucala, le loft inendawo yokuhlala enembono evulekileyo enebhedi enkulukazi, ibhedi egcweleyo yesofa, kunye nekhitshi kunye negumbi lokuhlambela eli-3. Iindwendwe zingena kwiveranda engaphambili ngesango labucala lokungena kwizinyuko ezikhokelela kwigumbi eliphezulu. Nje ukuba ziphumle, iindwendwe zinokuzinceda ngokusela ikofu okanye iti kwaye zizenzele ekhaya.
50" HDTV ene-I-Chromecast, izitishi zeTV eziqhelekileyo
4.98 · Izimvo eziyi-325
Sikwibala lefama kufuphi ne-HWY 11 phakathi kwePort Sydney/Utterson neHuntsville. Ikhaya lethu kukuhamba nge-12min ukuya kwizinto zasekhaya edolophini yaseHuntsville.
Kuphela yi-45min yokuqhuba ukuya kwi-Algonquin Park entle!
Sikumgama we-13min kuphela xa uqhuba ukusuka kwi-x-country skiing, ukutyibilika ekhephini kunye neendlela zokutyibiliza ngaphandle kwi-Arrowhead Provincial Park.
Umbuki zindwendwe ngu- Deanna
Iloft ibekwe ngaphezulu kwegaraji yekhaya lethu. Siya kukuvuyela ukunceda ngayo nayiphi na imibuzo onokuba nayo, okanye uncedo ngokucebisa iingcebiso kwiindawo ezishushu ukubona kwindawo.